Cool Emerald: February 2009
Reading and WritingaFile in VB 2005
တစ်ခါ တလေ Visual Basic 2005 ကိုသုံးပြီး ဖိုင်တွေရေးဖို့ ဖတ်ဖို့ လိုတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ အခါ အလွယ်တကူ ကိုးကားလို့ရအောင် တစ်ချို့ ကုဒ်လေးတွေ ကို တင်လိုက်ပါတယ်။ အောက်က နမူနာ နှစ်ခုကတော့ ဒီနေရာက နေ ကိုးကားထားတာပါ။
ဖိုင်ကိုသုံးနေတုန်း error တက်ခဲ့ရင် တော့ သုံးလက်စ ဖိုင်ကို မပိတ်နိုင်ပဲ ထွက်သွားတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကို တားဆီးဖို့ ကတော့ Try ... Finally ကိုအောက်ပါအတိုင်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
strLine = sr.ReadToEnd()
Visual Basic 2005 မှာ Using ဆိုတဲ့ statement အသစ် က IDisposable object တွေကို အလိုအလျောက် release လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Exception တစ်ခုခု ဖြစ်ရင် သူ့ရဲ့ caller ဆီကိုရောက်သွားမှာပါ။ အကယ်၍ အဲဒီ exception ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် catch လုပ်ချင်ရင်တော့ Try ... Catch ... Finally block ကိုပဲ သုံးရမှာပါ။
strLine = sr.ReadToEnd
ဖိုင်ဖတ်တဲ့ အခါ ပိုပြီးလွယ်ကူ ရှင်းလင်း ချင်ရင် File.ReadAllText or File.ReadAllBytes static method ကိုသုံးလို့လဲ ရပါတယ်။
Log files တွေ အလွယ်တကူ ရေးဖို့ class တစ်ခု ကို ရေးကြည့် ထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကုဒ်တွေကို VB class for log file on GitHub ကနေ ယူလို့ သုံးလို့ ရပါတယ်။
'Author: Yan Naing Aye
'Updated: 2009 June 25
Public Class ClsLog
Private mEnableLog As Boolean = False
Private mLogFileDirectory As String = ""
Private mLogFilePath As String = ""
Private mLogFileLifeSpan As Integer = 0
Private mLogFileFirstName As String = "AppName"
mEnableLog = False
mLogFileDirectory = My.Application.Info.DirectoryPath
mLogFileLifeSpan = 0
mLogFileFirstName = My.Application.Info.AssemblyName
Public Property LogFileLifeSpan() As Integer
mLogFileLifeSpan = IIf(value >= 0, value, 0)
Public Property LogFileFirstName() As String
mLogFileFirstName = value
Public Property LogEnable() As Boolean
If Directory.Exists(Me.LogFileDirectory) Then
mEnableLog = value
Throw New Exception("Invalid file directory.")
Public Property LogFileDirectory() As String
If Directory.Exists(value) Then
Dim i As Integer = value.Length - 1
If (((value(i)) = "\_") OrElse ((value(i)) = "/")) Then
value = value.Substring(0, i)
mLogFileDirectory = value
Public ReadOnly Property LogFilePath() As String
Return mLogFileDirectory & "\_" & mLogFileFirstName & Format(Now, "-yyyy-MMM-dd") & ".log"
Public Sub WriteLog(ByVal LogEntry As String)
If mEnableLog = True Then
mLogFilePath = mLogFileDirectory & "\_" & mLogFileFirstName & Format(Now, "-yyyy-MMM-dd") & ".log"
Dim objStreamWriter As StreamWriter = New StreamWriter(mLogFilePath, True)
Public Sub WriteTimeAndLog(ByVal LogEntry As String)
WriteLog(Now.ToLongTimeString & " " & LogEntry)
Public Sub CleanupFiles()
If mLogFileLifeSpan >0Then 'if life span is zero, there will be no cleaning up
Dim LogFiles() As String = Directory.GetFiles(mLogFileDirectory)
For Each LogFile As String In LogFiles
If (DateDiff("d", File.GetLastWriteTime(LogFile), Now) > mLogFileLifeSpan) _
AndAlso (Right(LogFile, 4) = ".log") Then
Posted by Yan Naing Aye at Sunday, February 22, 2009
Labels: File, Programming, Visual Basic
ကျွန်တော့် removable hard disk ကို Windows ရော Linux စက်တွေမှာပါ သုံးချင်ပေမယ့် ပြဿနာက Linux မှာ NTFS ကသုံးလို့မရ၊ Windows XP မှာကျတော့ FAT32 နဲ့ format ချလို့မရပြန်။ "format x: /fs:fat32" command ကို Windows XP မှာ သုံးတော့ ကျွန်တော့် removable hard disk က 32 GB ထက်ပိုကြီးလို့ မရဘူးတဲ့။ အကြာကြီးစောင့် ပြီးမှ error message နဲ့ အဆုံးသတ်သွားတယ်။ Windows Vista မှာပါတဲ့ FAT32 နဲ့ format ချကြည့် တော့လည်း အဲဒါကြီးက Linux မှာအလုပ် မလုပ်ပြန်ဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ fat32format.exe ဆိုတဲ့ freeware program သေးသေးလေးနဲ့ အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ တော်တော်မြန်ပြီး သုံးရလွယ်တယ်။ Drive X ကို format ချ ဖို့ "fat32format X:" ဆိုတာလေး ရိုက်လိုက်ရုံပဲ။ FAT32 သုံးခြင်းအား ဖြင့် တစ်ခြား Mac, Linux, အစရှိတဲ့ operating systems တွေမှာပါ အဲဒီ disk ကို သုံးလို့ ရသွားပါတယ်။
Posted by Yan Naing Aye at Sunday, February 01, 2009
Labels: FAT32, NTFS, System